Maansadan Dawo waa billowgii silsilad-suugaaneedka cusub ee la magac baxday Doodwanaag. Waxaa curiyay maansadan Maxamed Cali Cibaar oo ah arday cilmiga Hindisaha (Architecture) ka barta Jaamacadda Delft University of Technology ee waddanka Nederlaan. Waxay maansadani ka mid aheyd hadiyado uu Ururka Ardayda Soomaaliyeed ee waddanka Nederlaan guddoonsiiyay Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame “ Hadraawi ” markii uu socdaalkiisii Nabadda ku marayay waddankaasi bartamihii bishii Nofeembar sannadkii 2003da.
Ararta maansada kadib, Maxamed wuxuu tilmaamay ujeeddadii ku qasabtay in uu maansadan curiyo, taasoo uu sheegay in ay tahay inu uu wax uun dib uga celiyo abaalkii aan sinaba loo wada gudi karin ee ummadda. wuxuu si gaar ah u xusay canshuurtii laga soo ururin jiray dad aan awoodi karin iyo dadaalkii macallimiintii saboolka ahaa oo xaqoodii uu ku tilmaamay inuu yahay deyn iyo diyo ku maqan.
Intaa kadib waxay maansadani tilmaameysaa, inkastoo uu dhaawac weyni gaaray guud ahaan ummaddii soomaaliyeed, in haddana uusan xaalku quus aheyn oo haddii lala yimaado dadaal iyo is faham ay wali jirto fursad wax badan lagu sixi karo. Waxay kale oo ay maansadu abbaartay kaalinta suugaantu kaga jirtay waayihii ay ummaddu soo martay, iyo waliba sida loogu baahan in ay kaalin hormuudnimo ka qaadato sidii looga bixi lahaa marxaladaha qallafsan ee maanta taagan.
Ugu dambeyntiina Maxamed wuxuu tilmaamay in ay adduunka ku soo biireen musiibooyin lagu diimo oo aan horay loo aqoon, kuwaasoo ay dambiyadeennu keeneen. Wuxuuna kula talinayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed in ay ka waantoobaan dagaallada sokeeye oo aan dan u aheyn aakhiro iyo adduunba, lana yimaadaan dadaal iyo dulqaad badan. Ugu dambeeyntiina wuxu iftiimiyay in xalka kaliya ee mushkiladdeennu uu yahay in loo noqdo Ilaahii ina khalqay, lana raaco wixii uu ina faray iyadoo goows dambeedka lagu qabsanayo kitaabka iyo sunnaha.
W.T. Inj. Maxamed Cali Cibaar, Nofeembar 2003
Maansooy dulqaad badan
Danab iyo hillaaceey
Marna Diin gurguurtiyo
Dabran iyo curyaaneey
Marna haro diqoowdiyo
Dacar iyo dhunkaaleey
Heshiis soo dejiya iyo
Wax collaadda demiyaay
Marna isku direysiyo
Digo hoos ka nooleey
Dowdar iyo nin raga iyo
Dammiin iyo mid caalima
Daganiyo kan dabayaba
Dar ka wada dhexeeyoo
Qof walbaa darsanayiyo
Cidna wax uma diidaay
Diimahaagu badanaa ?!
Inkastoon ka durug iyo
Mar is iri ma deysaa
Inaan kuu danaanshoo
Aan kugu dadaaloon
Dib haddana go'aanshee
Wacad kama dambeysiyo
Bal dardaaran iga gunud.
Duruufaha kuwoow culus
Haddii dilif an leeyahay
Hanti inaanan kugu dalab
Kan iimaanka daranee
Dayac kaaga tagin abid
Dir-dir iyo qabiil iyo
Carrab dalab leh iyo been
Dano gaar ku maaree
Waxba lagu Dambaabiyo
Damdam ha ila soo galin.
Duhur iyo habeen dama
Duudsi iyo dhib waxa jira
Meel aan ka daawado
Diiraddana ka buuxsado
Ducufada la liideey
Dadku badi ka faanaan
Daacadduse u badantahay
Digdigta iyo boobkiyo
Daaraha ka taagmeey
kuwo darajo moodaan
Damaacigu ha buuxshee
waligaa ha igu deyin.
Dab naareed ka biqid iyo
Axdi qalin ku duugiyo
Waa arar daneynteed.
Hooyo muufo dubatoo
Digsi shaaha karisiyo
Oday daash ku tola kabo
Daangada ka ururteen
Jaamicad ku daakhilay
Waxa deymo igu maqan
Diyadii anoo gudi
Dan baan maanta leeyahay
Dood baanan furayaa
Daa’in hayla garab galo.
Doojin hagar la'aaniyo
Doow san u tilmaankii
Inta ila da'daayee
Hore loogu daalee
Qaran duudka uga jabay
Xilka loo diyaarshiyo
Waajibka dusheenna ah
Dayacaad anoon galin
Duul kalena cambaareyn
Dhib la neceb dadkeygoo
Wax berrito u daran iyo
Dhimbil aan u duugeyn
Daa'in hayla garab galo.
Digrii xagal wareegtiyo
Saableeyda deelka leh
Taxanaha la kala dado
Mas’alooyin lay diray
Xisaab baan dejiniyaa
Dubbe culus sidiisii
Qalab Atam daqiijiya
Dirka kiimikaad iyo
Falgallada la diirshiyo
Wax Ummadda dabiiboo
Qabyaaladda ka dila iyo
Dibir laysla helo iyo
Daqar lala wareeriyo
Inaan wada dammiin iyo
Dullin ina jaqaayiyo
Doqon fooraraa dhalan
Oon daadan dhaxalkii
Na dulleysan karin cadow
Rag u duuban weli jiro
Dadku inuu ogaadeey
Tahay dulucda maansadu
Waana Saxarla' daabacan.
Duufaanno baas iyo
Dariiqii ka leexsheen
Jamallo ku duqeeyeen
Dhinacyada ka diiseen
Qof waliba daraandaray
Inaan Doontu weli degin
Uuse ficilku door yahay
Degganaan farsamo tahay
Daruurina hoggaan yahay
Waana saxarla’ daabacan.
In suugaantu Deeq tahay
Cilmi noo dahsoon tahay
Iftiin daarma leyl tahay
Duugoobin abid tahay
Darmaan geesi fuuliyo
Gobonnimo u dirir tahay
Ooy gumeysi didis tahay
Dabbaaldegga hor kaca tahay
In Suugaantu diga tahay
Maati doodaheed tahay
Dabkey dhaxantu qabatuu
Abwaankii ka deyrshiyo
Dalqo aan la qarin karin
Dukumdaakum uga dhigay
Daldalaaye xusa tahay
Musuqmaasuq dura tahay
Dabbaabaad arlada guba
maafiyada direyska leh
iyo koox daroogo ah
Marka cududi Diin tahay
Wax ma garad durduriyee
Dakanaha la faafiyo
Culumada la dabarjaro
Caddaaladda la duugoo
Cilmigii la deyriyo
In Suugaantu dira tahay
Dawan qeylo dheer tahay
Wax damiirka lula tahay
Digtaatoorro rida tahay
Kuwa dafa agoontee
Duqoowdoo la Baartiyo
Shaqo Diirashow tahay
Kana nixin wixii dumma
Kala geeyay dariskii
Dumaashi iyo xididoo
Xigtadiiba kala diray
Dersigoodi inuu haray
Dagaalkuna hor leeyahay
Dalku waa inoo iib
Baadarigi Dirik baa
Doollar aan ka filayaa
Jaad leeygu doonee!
In la kala dareershoo
Qorshe loo diyaarshooy
Dowlad loo sameeyoo
Laga didiyo nacabkeey
Duruus Lenin bixiyiyo
Dirqin Shuuci lagu wado
Cidna lagu dabbaqi karin
Mabda' dool ku yimidoon
Inan sida Dameeraha
Layska daba rucleynoo
Dulduleelba laga helin
Laga dhigo dastuurbeey
Aqal labo daryaale ah
Dab haddii u kugu kaco
Durba waad ka carartaa
Biyo doonataa iyo
Ciid ku daadisaa meel
Saad ku demmin lahayd baad
Degdeg ugu dhaqaaqdaa
Dabadeed wixii hara
Dambas ba'ayna aan noqon
Yaa dib loo habeystaa
Dulsaar lama ahaadee
Iyo ummulo dooxii
U baqoolay dibaddoo
Darxumada la liitoo
Dermo meel walba u taal
Baaq in loo diraayoo
Naloo doorin maayee
Dalkeennii la aamino
Duunyo dhaqashadeed iyo
Dalaggana la beerteey
Xididigaha dusheenna ah
Dadaal buu ku gaaraye
Qeyrkeen halkuu dagay
Deris inan la noqonnoon
Naga durug niraahnoo
Degmo laga ag sahansado
Doorbin looga xiro gees
Galoobkana la daawado
Dadab loolalka u yaal
Macaadiinta dadan iyo
Shidaalkaa difta aheey
Qaar naga dabooleen
laga feydo daahoon
Cidi noo dardaarwarin
Waxan taa ku darayaa
Kuwan jufo daneyn ee
Samo wada deggeennii
Qarankii dummee tagay
Dib u soo gocanayee
Dacda aanu jiifniyo
Ka damqanaya ceebtoow
Da' kastoo ad joogtaan
Dumar iyo raggiinuba
Sharaftii an doonnee
Ma daddaaminnaa howl?
Duullaan ma kicinnaa?
Xaqa ma u dagaallaa?
Nafta ma ugu deeqnaa?
Daaf iyo ka daafteed
Hadraawi u duceeyee
Uu la sii dardaarmee
Isku - diridda gacalkiyo
Isku - dilid ka dheeroow
Isku - darana noqo yiri
Danyar ma u hibeeynaa?
Runta lama daboolee
Diirka mawga qaadnaa?
Deeqdii Ilaah iyo
Markuu roob ka soo da'o
Dhibco soo disleeyoo
Daciifoo itaal daran
Aan khadkooda laga duwin
Daqiiqadana lagu xirin
Birta iney dalooshaan
Ka dusaan Dhadhaabaha
Marna intey is doontaan
Daad rogmaday noqdaanoo
Dogobyada culculus iyo
Wax kastaba dildilliyaan
Buuraha dhex dooxaan
Daba dheer abaaruhu
Dandarrada ay reebaan
Diiftii ay meyraan
Duurkoo dhan xaadhaan
Doog iyo baxshaan cows
Nimco laga darduurtaa.
Dulman ee wareersani
Badi yahay wax-kama-dega
Haddaan daalku nagu badan
Ammaan daacad laga tagin
Kalsoonida la daayicin
Haddaan hadal daldalaniyo
Quusasho la daa’imin
Deyraduba wehel noqon
Mar un iney wax soo duxi
In kastuu ma-diiriyo
Dubku maaha kala midab
Luqaddoodu waa dahab
Duurxul iyo xigmado badan
Marba meeshi doogteey
Dar ka wada cabbaanoo
Daalo iyo ku maalaan
Deeyliyo Lo' gees loo
Doobi ku wadaagaan
Gayaankana ku doonaan
waana ul iyo diirkeed
Dikhil iyo illaa Buur
Aan deyrba kala xirin
Diintaana dhaqan u ah!
Waa dun aan la heli karin
Dunideey u mudanyiin
Deeqsi iyo Aftahan iyo
Caalim laga dabqaatiyo
Garyaqaan ka duda eex
Caaqil kala dabbaaliyo
Door waa ka buuxaa
Dar Alliyo samaan jecel
Dabataase noo timid
Nacab soo dagaagoo
Dambaskii yar qiiqaba
Dogob weyn ku huriyoo
Damaciisu uu yahay
Ama reebo Daadxoor
Oo Diiqba yuu harin
Dhulka aad dumaashide!
Bashiirkii la Dilay iyo
Iyo kuman dambeeyoo
U galbaday daraaddeen
Daaqad inan ka tuurroo
Hororkaa dalbaha lee
Dacas iyo kab buudiyo
Dabagaab karkaran iyo
Dulufyada ku raran weli
ay sida dayuusiin
Dusha naga raraanoo
Deeqo u adeegtooy
Daaji nagu hor miistaa
Dangiig talo ma joogtee
Dirir yaan ka baqinoo
U diyaara geerida?!
Oon rabay digniin culus
Kula duulayaa badan
Daanaqyo ad moogtahay
Dullaal aan xishoon iyo
Duflaal kaa sir bixiyoo
Docda kaa wareemoo
Kugu fura dariishado
Digashana u dheertahay
Iyo dire - diraalaha
Nabadduba u darantahay
Ableey daabka haystoo
Sida Eeyga loo diro
Ooy Fitnadu dihatee
Kan hunguri dardarayee
Dukaan kuu u furanyahay
Ama derejo sheegtoo
Maalintaa dabbari kara
Afka dufan u marin kara
Awliyada kor duushoow
Jannaad dalaq dhaheysaa
Dulmigaagu waa kheyr
Daliil baan u haynaa
Digri beena u aqriya
Durbaanada ku noolaha
U dukada dhankuu rabo
Dirham caabudaa iyo
Diktoorkii ma maqasheen
Damag siin ku taqasusay?
Oo daaqda Nederlaan
Dang yoowga Shiinaha
Deekahaa koley tahay
Duul kale afkoodiyo
Deerfoor la weyntahay
Kiisuna la dacar yahay
Oo halkii daryeel iyo
Bukaan uu daweeyiyo
Dowlis iyo wadaan iyo
Digir uu abuuriyo
Dugsi furisti laga rabay
Duudka tii ku qaaddiyo
Kuwa daadsan meeluhu
Duqsi weeye lagu yiri
Furuq daraf ka mara iyo
Gaajo hawgu darantee
Dakhligiyo waxa u yaal
Dambiilaha ku soo guro
Meelo lagu dakeeyiyo
Daasadda Khamriga iyo
Daniyeel ha moogaan
Markuu daad ku qaadoo
Inkaartii ku dabartoo
Daaf indhaha haleeloo
Darbiyada la seexdiyo
Dullinimo waxay tahay
Ducufyahow na weydii!.
Dirxi qasri sameystoo
Ka soo toosa Dabaqyiyo
Dib ruxmaba laheynoon
Foolxumo la dayi karin
Dawacada ka fududoo
Doolligu ka adagyahay
Dibi liqa yaxaaskoo
Dubaaxdiis cuntow jecel
Libaax daaqa beeraha
Dacwo ka ah Aboorkii!.
Taana waxa la darajaa
Malaayiin duq haystoo
Dubay laga raraayoo
Qado loo dawariyiyo
Baryo taajir daa’ imay
Daki iyo wax garad uu
Qabku daab u haystoo
Dabuubtii la baqayoo
Mid derderanna maamulo
Janan sii dallacayoo
Dable uu amraayoo
Debci iyo horuu soco
Dadka Shiikh wacdinayoo
Dusha taqi la moodoo
Wax is daba marsiiyoo
Dir kaleba qalbigu yahay
Boqor reer u duubtoo
Danta guud maslaxaddii
Dibjirada la foofoo
Mooryaanta kala dira.
Deel boqol dhibcood liyo
Amuuro lagu diimaa
Ku soo biiray dunidoo
Yaab baa dig soo yiri
Wali sii darsanayoo
Dariiqii rasuulkiyo (s.c.w.)
Marna goowsku sii deeyn.